Vagadziri bhegi Vagadziri & Vanotengesa - China Cosmetic Bag Factory
Yakakura hunyanzvi portable bhokisi rekuchengetedza bhokisi
Bhegi rekushongedza rakagadzirwa neyemhando yepamusoro yePU matte zvinhu, yakasununguka kubata uye ine mhedzisiro yekudzivirira mvura uye kupfeka kuramba. Chimiro chakatenderedza, mavara akasarudzika akasimba, ane mavara, ezuva nezuva cosmetics, miromo, zvigadzirwa zvekuchengetedza ganda uye mabhurashi kana zvimwe zvinhu zvidiki zvinodiwa kana uchifamba. Yakanakira yekuisa zvigadzirwa zvekuchengetedza uye zvinhu zvekuchengetedza.
Kuchengetedza anokwanisa kutakurwa zvishongo ekuchengetedza bhokisi
Yakasarudzika yakasarudzika dhizaini, uchishandisa yakakwirira-mhando uye zvakatipoteredza ushamwari PU zvigadzirwa, yemukati kusarudzwa kweakanaka uye akapfava velvet, yakakwirira-kumagumo, yakanaka yekuremekedza yakaratidzwa. Kune akawanda makomendi mukati, ayo ari nyore kuchengetedza mhete, mitsipa, miromo, mabango, mawati, nezvimwe, zvichikubvumidza iwe kugadzirisa uye kuchengeta zvinhu.
Iyo itsva cosmetic bag yekuchengetedza bhegi yakawanda-inoshanda mraba cosmetic bag rekuchengetedza bhokisi fekitori yakatengesa kutengesa
Multifunctional kuronga, ino inotakurika yakawanda inofamba yekushongedza bhegi rekuchengetedza bhokisi yakagadzirwa neyemhando yepamusoro uye zvakatipoteredza hushamwari Oxford machira, ayo ari splash-proof, kupokana-kupokana, kubvarura-proof uye nyore kuchenesa. Iyo yakanaka pakufamba, kunze kurongedza, kukwira, kuenda kuzororo kumisasa, kuenda kuchimbuzi kushambira kana gungwa, pamhenderekedzo, kurovedza muviri.
Nyeny Nyowani Nyowani Kudonhedza Bheti Isina mvura Kuchengeta Yechimbuzi Bhegi
Hwemhando yepamusoro: Iyo yekufambisa yakakosha bhegi yakagadzirwa neyemhando yepamusoro nylon, isina mvura uye inogara kwenguva refu, iri nyore kuchenesa, kudzoreredza, zvine hutano, hupenyu hwesevhisi, kuchengetedza kwakakwana kwezvinhu zvekuzora, chinhu chakatsiva mabhegi epurasitiki.
Inotakurika cosmetic bhegi inofamba cosmetic yekuchengetedza bhegi polka dot cosmetic bag
Bhegi rekushongedza rinogona kunge risiri rekushambidza bhegi, asiwo bhegi rekurongedza, bhegi rekuchengetedza, etc. Bhegi rekufambisa rine rakasiyana siyana rekushandisa. Yakagadzirwa yemhando yepamusoro yemhando yakasarudzika polyester zvinhu, unyoro-chiratidzo, isina mvura, inogona kuchengetedza zvinhu zvako, uye zviri nyore kwazvo kuchenesa.
Transparent pvc yekushambidzika yekushambidza bhegi isina mvura rinotakurika rinodonhedzwa cosmetic chikwama bhachi
Mabagi edu anoonekera ekuchenesa akagadzirwa neakakwirira-emhando yepamusoro PVC midziyo, ane zvakanakisa abrasion kuramba, mvura inodzivisa, yakanyanya kuramba zvipembenene, fungi, mhuka uye kuumbwa, kuumbwa, kuora uye akawanda makemikari, inogona kupa kwenguva yakareba kushandisa ruzivo.